Indawo Yeentaba - I-Névoa Cottage - I-Airbnb
Indawo Yeentaba - I-Névoa Cottage
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguHiarley
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uHiarley iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Yonwabela umtsalane weentaba ze-Espírito Santo kumphakamo we-840m.
Indawo inee chalets ezimbini, nganye ixhotyiswe ngebhafu ye-whirlpool ephindwe kabini, ibhedi ephindwe kabini ye-orthobom enesixhobo esinye, umabonwakude, ikhitshi le-gourmet, i-balcony, i-pergola, i-fan, isitovu, i-oveni, ifriji, izixhobo kunye nayo yonke enye into. Gqibezela indawo yebarbecue enezitena zodongwe, isitovu somthi, i-oveni yombane, imicrowave, ichibi lokuqubha elinokukhanya kwe-LED, kunye ne-gazebo eneembono zepanorama.
Isiza sigcine indalo kubo bonke ubukhazikhazi baso, isindululo kukonwaba nosapho kunye nabahlobo kwimozulu ye "Roça", amava afakwe kufutshane neHlathi leAtlantiki, elinamahlathi agciniweyo kunye nentuthuzelo efanelekileyo ukonwabela iintaba.
1 ibhedi elala abantu ababini, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
4.87 · Izimvo eziyi-47
Isekethe yabakhenkethi yaseChapéu ihamba phakathi koluntu kumphakamo oyi-870m. Isekethe lukhetho oluhle kwabo bafuna ukhenketho lwasemaphandleni, ukunxibelelana nendalo kunye noxolo, yi-9 km ukusuka kumbindi weDomingos Martins.
Umbuki zindwendwe ngu- Hiarley